चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ गर्यो परमाणु बमवर्षक, तेज फाइटर जेट ! « Lokpath
3 August, 2020 12:44 pm
चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ गर्यो परमाणु बमवर्षक, तेज फाइटर जेट !
प्रकाशित मिति :3August, 2020 12:44 pm
काठमाडौं । चीन भारत सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा गत १५ जून राती भएको हिंसात्मक झडप पछि विवाद झनै चुलिँदै गएको छ । गत १५ जुनमा भारत र चीनबीचमा हिंसात्मक झडप भएको थियो । जसमा भारतीय २० सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए ।
चीनले भने आफ्नो पक्षको बारेमा केहि पनि जानकारी दिएको छैन । यसैबीच भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार स्याटेलाइट फोटोमा चीनले आफ्नो परमाणु बमवर्षक विमान तैनाथ गरेको छ ।
चीनले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो लडाकू विमानमा तैनाथ गरेपछि भारतमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
स्याटेलाइटबाट लिइएको उक्त तस्वीरमा बमवर्षक लडाकू विमान देखिएको हो । तैनाथ गरिएको विमान ६ Xian एच-६ बम्बर रहेको छ ।
यी मध्ये दुईवटामा हतियार राखिएको छ । यी बाहेक पनि चीनले शेनयांग जे ११ १६ प्लेन तैनाथ रहेको छ । साथै चीनको सुखोई पनि रहेको छ ।
Investigating reports regarding #China's PLA Air-force deployments at #Kashgar Airport, satellite images spot strategic long range bombers along with other assets on site, factoring in the distance from #Ladakh, the deployment could be part of the #IndiaChinaFaceOff pic.twitter.com/Jm9VvSETFe
— d-atis☠️ (@detresfa_) August 2, 2020
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्थकर्ताको
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण शुल्क सरकारले तोकेअनुसार समायोजन नगरे
नेपाली शान्ति सैनिकलाई सम्मानस्वरुप कदरपत्र
नेपाली शान्ति सैनिकले प्रदर्शन गरेको साहस उत्कृष्ट रहेको भन्दै सेन्टर अफ्रिकन रिपब्लिकमा परिचालित
रियालाई १० वा २० वर्षको जेल हुनसक्ने : डेढ किलो चरेस भेटिएको एनसीबीको दाबी !
काठमाडौं । ड्रग्स केसमा मंगलवार बम्बे हाईकोर्टले सुनुवाई गरिरहँदा एनसीबीका एडिजी अनिल सिंहले